कलाकारिता भनेको सबैभन्दा पहिला आफैँसँगको विद्रोह होः परिवर्तन (अन्तर्वार्ता)::Digital News Paper
प्रकाशित मिति :सोमवार, माघ २९, २०७४ Monday, February 12th, 2018
पोखरामा पहिलो पटक नाटक घरमा नाटक मञ्चन हुँदै छ । यो चाँजोपाँजो प्रदेश नं. ४ कै पहिलो नाटक घर पोखरा थिएटरले मिलाएको हो । त्यसो त पोखरामा यसअघि नाटक नै मञ्चन नभएका भने होइनन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पोखरा सभागृह लगायतका सभा हलहरुमा बेला बेलामा नाटक मञ्चन हुँदै आएका छन् । नाटक घर नभएको अवस्थामा ती मञ्चनले पोखरेली नाट्यप्रेमीको मन केही हदसम्म बुझाएको भए पनि नाटकको वास्तविक स्वाद लिन भने थिएटरमै जानुपर्ने तर्क धेरैको पाइन्छ ।
पोखरा थिएटरले फागुन २ गते औपचारिक उद्घाटन गरी ३ गतेदेखि १५ गतेसम्म सरुभक्तको नाटक सिरुमारानी मञ्चन गर्दै छ । यसै सन्दर्भमा प्रहार न्युजका लागि रुपिन्द्र प्रभावीले पोखरा थिएटरका अध्यक्ष परिवर्तनसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ :
थिएटर नै निर्माण गरेर नाटक मञ्चनको तयारीमा हुनुहुन्छ, कस्तो छ तयारी ?
तयारी पूरा भएको छ । कलाकारहरु मञ्चमा उत्रिन तयार छन् र व्यवस्थापनको पाटोमा हामी लागिरहेकै छौँ ।
यसअघि पनि पञ्चामृत नाट्य समूहबाट यहाँहरुले नाटक मञ्चन त गर्नुभएको थियो नि ?
हामीले पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा नाटक मञ्चन गरेका थियौँ । त्यही कामले हामीलाई पोखरामा नाटक घरको आवश्यकता महसुस गरायो र आज यो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ । नाटक भनेको थिएटरमै मञ्चन गर्ने विधा रहेछ । कला प्रस्तुत गर्ने, निर्देशन गर्ने र हेर्ने सबैलाई नाटकको वास्तविक स्वाद त थियटरले मात्रै दिन सक्छ । ती नाटकहरु हाम्रा पूर्वाभ्यासहरु थिए ।
पञ्चामृतभन्दा अघि र पोखरा थियटरभन्दा अघि पनि पोखरामा नाटक मञ्चन र नाटक घर निर्माण कार्य त अघि बढेकै हो नि ?
यो त सत्य नै हो नि । कला, साहित्य भनेको कुनै एउटा संस्था वा व्यक्तिले मात्र योगदान गरेर पुग्ने क्षेत्र होइन । आफ्ना प्रतिभा, सोच र प्रस्तुतिहरु जनसमक्ष पु¥याउनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट । उहाँहरुप्रति कुनै नकारात्मक भावना राखेर वा प्रतिस्पर्धाको भावनाले नभई आफ्ना तर्फबाट पनि केही गरौँ भनेर हामी पोखरा थिएटरको निर्माणमा जुटेका हौँ । जता हेरे पनि दर्शकले नाटक हेर्न पाउनुपर्छ । आफ्ना–आफ्ना क्यालेन्डरअनुसार चल्दा नाटक मञ्चनको समय पनि जुधेको जस्तो मात्र देखिएको हो । यसमा कसैको दोष छैन । हामी त चाहन्छौँ नाटक मञ्चन जुधिरहोस् । दर्शकले छानेर वा आलोपालो गरेर हेर्न पाऊन् ।
अर्को नाटक घर पनि निर्माणाधिन छ । अहिलेलाई तपाईँहरुकै नाटक घरमा नाटक मञ्चन गर्छ भनियो भने के भन्नुहुन्छ ?
यो विषयमा हामी अत्यन्त खुला छौं । यतिसम्म कि हामी त युथ क्रियशन थिएटरको नाटक घर निर्माणका लागि नाटक मञ्चन गर्नै तयार छौँ । जुनसुकै सहकार्य गर्न हामी सधैँ तयार छौँ ।
तर तपाईँहरु व्यक्तिगत लगानीमा काम गरिरहनुभएको छ । आदर्शवादी भएर त पक्कै जीवन चल्दैन होला नि ? व्यावसायिक ढङ्गले के सोच्नुभएको छ ?
करिब ८० लाख रुपैयाँ मसहित दिलप्रसाद गुरुङ र शङ्करनाथ कोइरालाले लगानी गरेका छौँ । हामीसँग पैसा भएर भन्दा पनि इच्छाशक्तिलाई मूर्तता दिने प्रयत्न हामीले गरेका हौँ । अझै भन्ने हो भने पोखरेली रङ्गमञ्चलाई जसरी भए पनि उठाउनुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ । के के नै मुनाफा कमाउँलाभन्दा पनि ऊर्जा र सन्तुष्टि पाएका छौँ हामीले । कम्तिमा २–३ वर्ष हामीले नाफाको सपना देखेका छैनौँ । व्यावसायिक नाटकको सुरुवात मात्रै गरेका हौँ । कलाकारिता भनेको सबैभन्दा पहिला आफैँसँगको विद्रोह हो । त्यसपछि मात्र समाज वा अन्य पक्षसँगको सङ्घर्ष अघि बढ्छ ।
सरकारी निकायको सहयोग चाहिँ कत्तिको पाउनुभो ?
थिएटर संस्कार विकास भइसकेको छैन । केही राजनीतिक व्यक्तिहरुले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित बजेट विनियोजनसमेत गर्नुभएको पनि थियो तर परिस्थिति अनुकूल हुन सकेन । वास्तवमा स्मार्ट सिटीका लागि कम्तिमा एउटा थिएटर अनिवार्य छ । नाटकप्रेमीहरुको उत्साह चाहिँ स्मरणी छ । आशा छ, सबै क्षेत्रको सहयोग मिल्ने नै छ ।
पहिलो नाटक सिरुमारानी मञ्चन गर्दै हुनुहुन्छ । यो नै किन ?
पहिलो कुरा त यो सरुभक्तको नाटक हो र सरुभक्त पोखराका गौरव गर्नलायक नाटककार हुनुहुन्छ । उहाँका धेरै नाटक पोखरामा मञ्चन भएको छैन । दर्शकलाई प्रभाव पार्न सक्ने नाटक भएकाले पनि यो रोजिएको हो ।
कलाकार प्रकाश घिमिरे र माअाेत्से गुरुङ नाटककाे रिहर्सलमा ।
तर यो काठमाडौँ मञ्चन भइसकेको नाटक हो । काठमाडौँमा भन्दा फरक के हुन्छ पोखरामा ?
नाटक एउटै भए पनि काठमाडौँ र पोखराको मञ्चनमा धेरै फरक छ । उता अहिलेका चर्चित कलाकार दयाहाङ राईले निर्देशन गर्नुभएको नाटकलाई यहाँ मण्डलाकै सोमनाथ खनालले निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ । अर्को यसको विशेष कुरा के भने, पोखराबाट स्थापित रङ्गकर्मीहरु प्रकाश घिमिरे, माओत्से गुरुङ, विष्णु गौतम जस्ता कलाकारहरुको नवप्रवेशी कलाकारहरुसँगको उत्कृष्ट फ्युजन भएको छ ।
के छ यो नाटकमा ?
यो लोक नाट्य तत्त्वले युक्त नाटक हो । लोक नाटकलाई आधुनिक रङ्गमञ्चमा उतार्ने प्रयास यसमा गरिएको छ । इतिहासदेखि आजको राजनीतिसम्म यसले छोएको विषय हो । हाम्रो लोक संस्कृति, कला, परम्परा, दार्शनिक पक्ष बुझ्न चाहनेले यो नाटक हेर्नैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्योभन्दा बढी पोखरामा पहिलो पटक थिएटरमा नाटक मञ्चन हुँदै छ । यसमा आफ्नोपन महसुस गरेर पनि दर्शक आउनुहुने अपेक्षा मैले गरेको छु ।
चलचित्रले मानिसलाई लोभ्याइरहेको अवस्थामा नाटकतिर कत्तिका आउलान् तर दर्शक ?
पक्कै पनि चुनौती छ तर मलाई लाग्छ, आजको नेपाली चलचित्र बुझ्ने दर्शक झन् बढी थिएटरमा आउँछन् । आज थिएटरबाटै आएका कलाकारले नेपाली चलचित्रलाई नयाँ मोडमा लगिदिएका छन् । झण्डै धराशयी भइसकेको नेपाली चलचित्र उद्योगलाई आशालाग्दो अवस्थामा पु¥याउने श्रेय केही हदसम्म थिएटरलाई पनि जान्छ ।
अब पोखरामा थिएटर संस्कृति निर्माणका लागि के गर्नुहुन्छ ?
राजधानीकेन्द्रीत नाट्य गतिविधि अब पोखराबाट जुर्मराउँदै छ । स्थानीय सक्रियतामा बनेको नाटक घरलाई पक्कै पोखरेलीले माया गर्नुहुने छ । अब पास बाँडेर नाटक देखाउने दिन गए । त्यसो गरियो भने २ वर्षपछि पोखरा थिएटर पनि बन्द हुने छ । यदि यस्तो भयो भने पोखराको रङ्गमञ्च अर्को १० वर्ष फेरि सुस्ताउँछ । २ जना दर्शक भए पनि हामी नियमित नाटक मञ्चन गर्ने छौँ । प्रदेश नं. ४ र समग्र नेपालकै समग्र मौलिकतालाई नाटकका माध्यमबाट जनसमक्ष पु¥याउने प्रयास गर्ने छौँ । काम चलाउ काम गरेर छुटकार पाउने प्रयास हामी गर्दैनौँ, स्तरीय नाटक मञ्चनका लागि इमानदारीका साथ काम गर्ने छौँ ।
सिरुमारानी दर्शकले कसरी हेर्न पाउँछन् त ?
फागुन ३ गतेदेखि पोखराको गैह्रापाटनस्थित पोखरा थिएटरमा आएर हरेक दिन ४ः४५ बजेदेखि नाटक हेर्न सकिने छ । विद्यार्थी सहुलियत १०० रुपैयाँ र अन्यले ३०० र ५०० रुपैयाँको टिकट काटेर नाटक हेर्न सकिने छ । बिदाका दिन दिउँसो १ बजे अतिरिक्त सो पनि हुने छ । पोखराको ७ दशक लामो नाट्य इतिहासमै पहिलो पटक नाटक घरमा नाटक हेर्ने अवसर पोखरेली दर्शकले पाउनुभएको छ । आम पोखरेली दर्शकलाई पोखराको नाटकलाई अघि बढाउने आफ्नो दायित्व सम्झेर थिएटरमा आइदिनुहुन अनुरोध पनि गर्दछु ।